Uyazi njani igama eligqithisiweyo lefayile ye-pdf-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2011 Internet kunye neBlogs, Ezahlukeneyo
Kungenzeka kuthi kuthi ukuba sinike iphasiwedi kwifayile ye-pdf kwaye ekugqibeleni siyilibale, okanye kwelinye icala, abantu abasebenzela iziko kwaye balinikezela ngegama eligqithisiweyo elilahlekileyo ekugqibeleni. Nangona sihlawulela umsebenzi hayi ipassword, ukuphulukana nayo kuphantse kufane nokuphulukana nayo yonke into ukuba asinakufumana ukuba ngubani owenze lo msebenzi, kungasathethwa ke ukuba bekuyiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye balibale ukuba ngelo xesha babesebenzisa igama lesibini lika intombi.
Ngesi sihlandlo ndiza kubonisa iindlela ezimbini, nangona zikhona ezinye ezenza ngokungqinelana nezo ndinamava ambalwa amnandi.
1 Sebenzisa iRemover yePassword yePDF
Isikhuphelo sephasiwedi yePDF v3.1 sisicelo sokuba malunga ne-30 yeedola isombulula phantse into esiyifunayo. Inguqulelo yolingo isivumela ukuba sisebenze nenani eliqingqiweyo leefayile, emva koko isicela ukuba sithenge ilayisensi, nangona ukuyikhuphela kufuneka sisebenzise i-antivirus kuba ukuba sinayo elungele kakhulu iya kuyithathela ingqalelo le ndawo kuba iyaphumelela ngqo.
Le nkqubo iyenzayo kukuvula ifayile, ususe iphasiwedi kwaye usicele ukuba siyigcine kwenye indawo ngaphandle kokhuseleko. Into engalunganga kule nkqubo kukuba inokucacisa igama eligqithisiweyo lohlobo "umnini"Nangona kunjalo, lukhona olunye uhlobo"umsebenzisi"le nguqulo ayinakuyenza, njengoko uXueHeng asixelele, banethemba lokuyibeka le nto kuhlobo olulandelayo lwePro.
Kwimeko apho ifayile inephasiwedi yohlobo lomsebenzisi, iya kusibuza ngegalelo kwaye ukuba asikwazi, sifumana umyalezo:
2. Sebenzisa iCrackpdf
Esi sisicelo seLinux sogqithiso ekukhutshweni kwalo kule ndawo:
Kukho abo bayilungisileyo kwiWindows, kunye nethala leencwadi i- cygwin1.dll engangeni inguqulelo yoqobo kwaye inokukhutshelwa kule dilesi.
Ifayile icinezelwe, kwaye kuba kufuneka yenziwe kwilayini yomyalelo, kufuneka ibekwe kufutshane nolawulo lweengcambu. Kule meko ndigcine incwadi enegama enegama "pdffMsgstr "" "ifayili endikhuselekileyo ndiyigcinile kwifolda efanayo negama isampula.pdf. Ukuyiphumeza sisiya kumyalelo we-DOS wokukhumbula kwaye khumbula ezinye zeemiyalelo zakudala esasisifunda:
Oku kwenziwa kwiWindows: Qala> Qalisa> cmd. Xa usenza ukungena, ikhonsoli kufuneka ivele ngemvelaphi emnyama.
Ngoku, siya kulawulo lomdla wethu:
Nokuba siphi na, kufuneka sibhale: cd .. ngoko senza ukungena. Sikwenza amaxesha amaninzi de sibe sinengcambu C: \_>
Ukungena kulawulo lomdla wethu, sibhala: cd pdff. Ngale nto ikhonsoli kufuneka ibe: C: \_ dff>
Ngoku, senza umthetho: pdfcrack -f isampulu.pdf. Oku kuyakubangela ukuba inkqubo iqale umjikelo wokukhangela amaqhosha anokubakho, ngokufana noko sikubonayo kumfanekiso. Kuxhomekeke kubunzima besitshixo, ukukhangela kungathatha iiyure ezininzi, isenzo sinokushiyeka siqhuba -inokuba ubusuku bonke-kude kube ekugqibeleni kuvela umyalezo ofana nalowo uboniswe ngezantsi: Igama eligqithisiweyo lomsebenzisi: 'iphasiwedi siyikhangela'.
Inkqubo ibonakala ilula, nangona inokhetho oluninzi, njengoku:
-w onokuthi unikeze uluhlu lwezitshixo ezinokwenzeka kwifayile
-Ukuba ujonge kuphela igama eligqithisiweyo lomsebenzisi, oku kungagqibeki, ngenxa yoko akukho mfuneko yokuba ndichwetheze
-Ukufumana ipaswedi yomnini
-m Ukuyeka xa ifikelela kwinani elithile labalinganiswa
-Ukuba ungakhangeli kumagama ubuncinci abalinganiswa
Post edlulileyo«Ngaphambilini Uphefumulelwe i-2011
Post Next Ukuba egeomates waba 100 abafundiOkulandelayo »
Phendula impendulo "Uyazi njani iphasiwedi ye-pdf fayile"
Enkosi !! Le yindlela elungileyo. Ndikucebisa ukusebenzisa inkqubo yokubuyisela iphasiwedi ngaphezulu kwale ndlela. Le software inokufumana iphasiwedi kwifayile ye-PDF efakwe apha. IPassprog Elibalekileyo IPassword https://pasprog.com/forgotten-pdf-password.php